Ixesha elide, uMarianne nguLeonard Cohen - Izinto Zobugcisa
Ixesha elide, uMarianne nguLeonard Cohen
'Marianne' kule ngoma nguMarianne Ihlen, owadibana no-Leonard Cohen kunye nonyana wakhe kwisiqithi sase-Hydra kwisiGrike. Emva kwexesha, bobathathu bafudukela eMontreal. Unyana kaMarianne, u-Axel, wayevela emtshatweni wangaphambili kunye nombhali waseNorway u-Axel Jensen, owayehlala eHydra ngelo xesha.
UCohen wayibhala le ngoma xa bohlukana, kodwa babuyelana bahlala ndawonye de kwase-1973, nasemva kokuba uCohen ebenonyana, uAdam, kunye nomnye umfazi ngo-1972. ubudlelwane obunothando obazisa iingoma zakhe.
UMarianne le ngoma imalunga neNorway kwaye wabiza igama lakhe 'Ma-ri-AN-ah.' UCohen wasebenzisa ukubiza okuqhelekileyo kwesiNgesi (njengo 'Mary-Ann') kwingoma kuba isilabhasi eyongezelelweyo ayinakulunga.
UJudy Scott, owadibana noMarianne eHydra ngo-1973 kwaye wasondelelana kakhulu naye, waxelela uSongfacts ukuba unjani: 'Umbono wam wokuqala yayingumfazi othandekayo, omde, nomdaka ngebala omalunga neminyaka engama-35. Ndamazi ngcono.
Uye wakhankanya ingoma ethi 'So Long, Marianne' kwaye wandixelela ukuba ekuqaleni ibinesihloko esithi 'Yiza, Marianne' kodwa kamva uLeonard wayitshintsha. Wayeyithanda le ngoma, nokuba ingavusa ubume bolwalamano lwabo.
Ndathi xa ndimtyelele eOslo wayedlala ingoma yakhe kwistereo sakhe esincinci, kwaye ejonge efestileni, wathi kum, 'Into enoLeonard yile, uyenzile le nto ebezimisele ukuyenza. Waphumelela apho abanye abaninzi basilelayo. Kumenza phantse angabinakuphepheka ebomini bam. ''
Ngaba ufuna ukubona ifoto kaMarianne? Kwiphepha elingasemva le-albhamu ka-Cohen ka-1969 Iingoma ezivela kwigumbi Kukho umpu ohleli phambi komatshini wokubhala kaCohen.
UMarianne Ihlen noLeonard Cohen bobabini babulawa ngumhlaza kwi-2016; Ihlen ngoJulayi kunye neCohen ngoNovemba. Xa uCohen wafumanisa ukuba uyagula, wambhalela ileta ethi:
Kulungile uMarianne ufikile kweli xesha xa sibadala kakhulu kwaye imizimba yethu iyawohloka kwaye ndicinga ukuba ndiza kukulandela kwakamsinya. Yazi ukuba ndisondele kakhulu kuwe ukuba xa usolula isandla sakho, ndicinga ukuba ungafikelela kwesam. Kwaye uyazi ukuba bendihlala ndikuthanda ngenxa yobuhle bakho kunye nobulumko bakho, kodwa akukho mfuneko yokuba ndiphinde ndithethe ngale nto kuba uyazi yonke loo nto. Kodwa ngoku, ndifuna nje uhambo oluhle kakhulu. Sala kakuhle mhlobo omdala. Uthando olungapheliyo, ndikubone usendleleni.
Isihloko sokuqala sikaLeonard Cohen sale ngoma sithi 'Yiza ku Marianne.' Nini Uncut USylvie Simmons wambuza ukuba kutheni eyitshintshile, waphendula wathi: 'Ndingumbhali wee-elegies.'
Ndiyabona ukuba umkile kwaye utshintshe igama lakho kwakhona
UMarianne wazalwa nguMarianne Ihlen. Waba nguMarianne Jensen emva kokutshata noAxel Jensen. Yena noCohen zange batshate, kodwa ngamanye amaxesha wayesebenzisa igama likaMarianne Cohen xa babekunye, ngamanye amaxesha basebenzise igama lakhe lobuntombi, u-Ihlen.
Usasazo lwaseNorway lwasasaza udliwanondlebe lokuqala noMarianne Ihlen ngoJanuwari 22, 2006. Wachaza uCohen njengendoda 'enovelwano olukhulu.'
ukubuyela nje kwakhona
xa ndivuka ekuseni ndiphume ndiye phandle
owayecula umnini wentliziyo elilolo
buyela umva udanisa kinda kufutshane
kuthetha ntoni ukubona 555
tlc musa ukuhamba uleqa iingoma zamanzi
Inombolo yeengelosi ezili-15 ezinentsingiselo